Iindawo zokuhlala 1 Ibhedi ekumgangatho ophantsi Apt - I-Airbnb
Iindawo zokuhlala 1 Ibhedi ekumgangatho ophantsi Apt
Le flethi intle inegumbi elinye ilungele undwendwe olunye okanye isibini esiza eChester ukuze sifumane indawo yokuhlala. Okanye utyelelo lwalo naluphi na ubude. Nokuba uhamba ngomsebenzi okanye ukuphumla, indawo yokuhlala likhaya lakho elitofotofo ukusuka ekhaya.
Le ndlu inebhedi ephindwe kabini kunye newodrophu kunye nendawo eninzi yokugcina. Ikhitshi inayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale uziphekela. I-WiFi, ilinen kunye neetawuli zibandakanyiwe njengesiqhelo.
Nokuba unomdla kwimbali okanye ulikhoboka lokuthenga. UChester unento yakho. Ndwendwela iindonga zaseRoma kunye necathedral, okanye uzipholele kwivenkile yomyili weCheshire Oaks kwimizuzu nje embalwa uqhuba. Ukushiya isixeko, uya kufumana i-Chester Zoo edumileyo kunye nemimandla yasemaphandleni emangalisayo.
Sinezindlu ezininzi ezininzi njengendawo yokuzenzela ukutya okanye ukuhlala ixesha elide kwishishini.
Sitsalele umnxeba kule nombolo 01244343355 ukuba ufuna olunye uncedo,
Igumbi lokulala eli-1 elinegumbi lokulala eli-2, entliziyweni yeChester kwindlela yesiXeko, ukuhamba ngaphantsi kwemizuzu emi-5 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe i-Chester kunye nombindi wedolophu, obonelela ngezibini, abahambi bodwa kunye nabahambi beshishini ngenye indlela enkulu yokuya ehotele. . Ngendawo engaphezulu kunegumbi lehotele kunye nenzuzo eyongeziweyo yekhitshi ukupheka isidlo osithandayo, amagumbi ethu abonelela ngokuguquguquka okukhulu. Le ndawo ilawulwa ngokusemthethweni kwaye zonke iilinen zebhedi kunye neetawuli zinikezelwe.
Ezinye izinto zegumbi elinye lokulala ziquka i-32 Inch Smart TV, isofa entsha yodidi oluphezulu, itafile yokutyela ezimbini kunye nokuhamba imizuzu emi-5 ukuya kwiziko ledolophu yaseChester.
Nokuba ulapha kwishishini okanye ekuzonwabiseni, nje ukuba uphume ngaphandle kwebhloko yezindlu ezikwiZiko leSixeko ngomba wemizuzu kwaye unesikhululo sikaloliwe esikhulu esinokufikelela ngokulula kwizinto ezithandwa yiNorth Wales, Liverpool kunye neManchester kwindawo yakho. emnyango. Umba nje oziimitha ezili-100 kude uneendawo zokutyela ezintle kwaye ukuhamba kwiCanal kukuthatha udlule kwiibhari kunye neendawo zokutyela ezilungileyo.
I-City Suites iya kukunika amava afanelekileyo okukhapha iSixeko ngokwaso.
I-City Suites yibhloko emangalisayo yamagumbi okwakha amatsha, anokubonelela ngeendwendwe ezi-1-6 kuluhlu lwamagumbi, eziyilelwe ukujongana ngokukodwa nondwendwe lwexeshana elifutshane, ngubani na ondwendwela esi Sixeko seMbali ukuzonwabisa okanye ushishino. umxhasi osebenza kwisiXeko kwaye ufuna ikhaya elizimeleyo elivela kumakhaya. Ime ngokugqibeleleyo ukuvumela umqeshi ukuba axhamle, ngeenyawo, kuyo yonke into uChester anokuyinikezela. Sinamagumbi ali-17 anefenitshala epheleleyo akhoyo. Siyakwazi ukuhlalisa iindwendwe ezingama-66 zizonke kuwo onke amagumbi
Zenze usekhaya kwindawo yethu etofotofo kumgangatho wethu wokuqala onegumbi lokulala, kunye ne-Smart TV.
Igumbi lokuhlala lineesofa ezitofotofo eziza ne-smart TV. Egumbini kukho netafile yokutyela.
Igumbi lokuhlambela ligqitywe kumgangatho ophezulu kwaye liquka ibhafu enecubicle yeshawari yokuhlambela, indlu yangasese, isinki nesipili.
Igumbi lokulala linebhedi ephindwe kabini enomandlalo wepokotho obandakanya iitawuli kunye nebhedi enikelwe ukuhlala kwakho.
Le ndawo yenzelwe ukukholisa kwaye ingajongi ukwaphula naluphi na uhlahlo lwabiwo-mali njengexabiso elingaphezulu kuneHotele.
Ii-Suites zesiXeko zikwi-City Rd, umgama nje wemizuzu emi-3 ukuya kwisikhululo saseChester (iiyure ezi-2 ukuya eLondon), ukuhamba imizuzu emi-4 ukuya kwiZiko lesiXeko kunye nokuhamba imizuzu emi-2 ukusuka kwiindawo zokutyela ezilungileyo-yonke into iChester City Centre kufuneka ihambe ngeenyawo. ukusuka kula magumbi kunye neChester ngokwayo ifikeleleka ngokulula ngazo zonke iikhonkco zemoto ezinkulu.
Sifumaneka ngomnxeba imini yonke, okanye ngomyalezo wakwa-Airbnb. Ngaphandle kweeyure zokusebenza sinenani elingaphandle kweeyure ezifumanekayo kuzo zonke iindwendwe.